जनता बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २० जेठ २०७६)
यस बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म रू. १ अर्ब २ करोड ३७ लाख ४४ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा रू. ६३ करोड ७५ लाख ९१ हजार थियो । यस वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकको वितरणयोग्य नाफा रू. ६१ करोड ७३ लाख ७५ हजार छ । बैंकको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब ७ लाख ८५ हजार छ ।
तेस्रो त्रैमासमा रू. ७० अर्ब ४४ करोड ९७ लाख ९३ हजार निक्षेप संकलन गरेको बैंकले रू. ६४ अर्ब ७० करोड १० लाख ८७ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव २१ प्रतिशत रहेको बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक १७ रुपैयाँ ६ पैसा छ । आइतवारको कारोबारमा बैंकको अन्तिम शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबारभन्दा २ अंक घटेर रू. २१० कायम भएको छ ।
2019-06-03 - 288 view(s) - abhiyan